Talooyin Ku Saabsan Cimilada: Isticmaalka Isticmaalka Dokumentiga Google Analytics
Bilihii bilood ee la soo dhaafay, spam gudbinta Google ee falanqaynta ayaa mawduuc ka ahaa doodda suuq-geynta suuqa . Ka horjoogsiga iyo ka saara labada taranka iyo spam-ka ee laga helo warbixintaada GA-ga lagama yaabo in la iska indho-tiriyo. Helitaanka, kasbashada iyo falanqaynta xogta nadiifka ah iyo saxda ah waxay ku heleysaa boggaga WordPress oo ku socda jihada iyo darajada sare ee algorithms.
Sida webmaster ahaan, muhiimada sameynta cilmi-baarista iyo fahamka sida spam u gudbinta bogagga internetka waa mid muhiim ah. Sida lagu daboolay xayiraadda Google Analytics gudbinta spam qaybta 1, nadiifinta labada spam ee loo yaqaan "spam spam references" iyo "spawler referring spam" waa in la fuliyaa si ka duwan - surveillance camera installation companies. Sida laga soo xigtay suuq-geynta suuq-geynta, spam-u-gudbinta qaylo-dhaanta ayaa shaaca ka qaadaya xogtaada GA iyada oo loo marayo adeegsiga server-yada dibedda. Dhinaca kale, spam taranka tooska ah wuxuu si toos ah u galaa boggaaga. Si aad u tirtirto spam ka imtixaannada, tixgeli inaad fuliso tabaha soo socda ee ay bixiso Jack Miller, oo ah Semt Maareeyaha Guusha Guud ee Macaamilka
Ka-qaadista SPA gudbinta gudbinta iyadoo la adeegsanayo tixgelin gaar ah
Ka-saarista SPA gudbinta gudbinta iyadoo la isticmaalayo tixgelin gaar ah .htaccess waa hawl aad sameeyneyso oo aad si toos ah u isticmaali karto mashiinkaaga deegaanka. Habkani wuxuu siinayaa websaydka fursad ay ku isticmaalaan tifaftireyaasha WP htaccess iyo xakamaynta WP htaccess.
WordPress wuxuu ka dhigayaa ka saarida labada ciriiri iyo spam labada dhan oo la heli karo iyadoo loo marayo isticmaalka plugins. Si kastaba ha ahaatee, ka feker inaad ogaatid inaanad u baahnayn inaad gasho boggaaga WordPress si toos ah u fuliso faylka .htacess iyo tirtirto spam ka imtixaanida marka la isticmaalayo qalabyada. Haddii aad xusuusato inaadan haysanin faylka .htacess ee WordPress, u gudub boggaga 'Settings' oo ka dooro 'Permalinks.' Ku dhufo 'Isticmaal Isbedelada' icon si loo hirgeliyo buugga iyo tirtiraan spam ka imtixaan si guul leh..
Isticmaalida habka habdhaqanka si aad u tirtirto spam ka imtixaanka
Isticmaalka feylka faylka ah ee faylka ah si aad u tirtirto ugana tirtirto spam kaaga Google Analytics waa mid sahlan oo fudud. Farsamadani waxay u shaqaysaa ugu fiican si ay u xakameyso spam sahlaya inay ka soo galaan website-kaaga. Si aad u hesho faylka faylka faylka .htaccess ee ku yaal boggaaga, waxaad maraysaa shabakadda asalka ah ee server-kaaga. Waa kuwan tilmaame habraac ah oo kaa caawin doona inaad joojiso spam gudbinta ee ka soo baxa warbixinta falanqaynta adiga oo adeegsanaya faylka faylka .htacess.
A) U diyaari shabakada domainka rootiga ee serverka si aad u hesho faylka .htaccess. Ku keydi feylka si aad u sameysid buugga oo aad nuqul kale u sameysato si aad u sameyso xal badbaado.
B) U diyaari feylkaaga ilaha ugu dambeeyay ee spam u gudbinta. Ku bilaw nidaamka raacsan spam ee raacsan oo ku dar 'RewriteCond' oo ku saabsan asalkaaga asalka ah.
C) Ka dib markii ay ku qanacsan tahay in ka-saaritaanku si guul leh loo hirgeliyey, nuqul dib-u-cusbooneysi ah oo ku dul-dheji server-kaaga. Xaaladaha qaarkood, website-kaaga ayaa laga yaabaa inuu ku guuldareysto inuu kaco. Uma baahna inaad walwal qabto. Dib-u-dir koobi asalka ah si aad u soo celiso qoraalkii hore
Maxay tahay inaadan waxba ka beddelin feylkaaga .htacse
Sida webmaster ahaan, waxaa laga yaabaa inaad jiidato inaad bedesho feylkaaga WordPress .htacess si aad ugu qanciso baahiyahaaga iyo qeexdimahaaga waqtiga dhabta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isticmaali kartaa faylka qaabeynta si aad u xakamayso noocyo kala duwan oo ka mid ah cinwaanka IP laga bilaabo booqashadaada. Tani waa hilib kale oo ay isticmaalaan webmasiga si ay u tirtiraan spam-ka si sahlan u falanqaynta. Ka dib markii la xakameynayo cinwaanada kala duwan ee IP, dadka booqanaya isku dayaya inay galaan internetkaada adiga oo adeegsanaya cinwaanada had iyo jeer la kulmaan khaladaadka.
Maareynta website-yada ay saameeyeen taranka iyo spam ee dagaalada waxay noqon kartaa shaqo adag. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad argagaxto haddii aad la kulantid spam gudbinta gudbinta warbixinta Google Analytics. Samee siyaabaha kor ku xusan ee looga hadlo si aad u tirtirto spam ka imtixaannada si hufan.